युगसम्बाद साप्ताहिक - चन्द्रमानको राष्ट्रवादी दृष्टिकोण
Tuesday, 04.07.2020, 03:16pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 10.01.2012, 08:05pm (GMT+5.5)
लामो समयदेखि प्राध्यापन पेशामा संलग्न रहँदै आउनुभएका डा.बज्राचार्य स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ । विभिन्न विषयवस्तुलाई गहिरो ढंगले अध्ययन गरी वस्तुनिष्ठताको आधारमा विश्लेषण गर्ने बज्राचार्यका लेखहरू पूर्वाग्रहरहीत हुने गर्दछन । यसै गरी उहाँका लेखहरूमा सिर्जनात्मक सुझाव र रचनात्मक दृष्टिकोण पनि समेटिने गर्दछन शैलीका हिसावले अत्यन्त सरल र सहज प्रस्तुति रहने उहाँका लेखहरू जो कोहीले पढ्न, बुझ्न र मनन गर्न सक्दछन । यही मेसो र लेखकीय विशेषता अभिव्यक्त भएको कृति हो “किन पिरोल्छ भारत नेपाललाई” ।
प्रस्तुत पुस्तक वास्तवमै समसामयिक छ । पुस्तकमा समावेश विभिन्न लेखहरूले नेपालका धेरै विषयवस्तुहरूलाई छोएका छन । कितावलाई नामको आधारमा विश्लेषण गर्दा राष्ट्रवादमा मात्र अल्झेजस्तो लागे पनि अरु धेरै विषय र शीर्षकहरू यसभित्र समेटिएका छन । राजनीति, अर्थ, संस्कृति, शिक्षा, संस्कार, वातावरण र विज्ञानका कुरालाई समेत छोएर समसामयिक घटनाहरूमा खदिलो दृष्टिकोण प्रस्तुत भएका छन । कही कतै विचारमा विरोधाभाषजस्तो देखिए पनि विश्लेषणका लागि प्रस्तुत तर्कहरूले एउटा निष्कर्षको विन्दुमा पुग्न सजिलो पार्ने पथ तय गरेका छन । त्यसैले प्रस्तुत कृतिका लेखहरूलाई सही गन्तव्यमा पुग्ने सुविचारित दृष्टिकोणहरूको सङ्गालो मान्न सकिन्छ ।
समय अवधिका आधारमा विश्लेषण गर्दा गणतन्त्र स्थापनापछि नेतृत्वमा आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा घटेका घटनाहरूको बारेमा पुस्तक बढी केन्द्रीत भएको अनुभूति हुन्छ । कतिपय लेखहरूमा उहाँले नेताहरूको क्रियाकलाप, कार्यशैली र चरित्रप्रति नै प्रश्न उठाउनु भएको छ । उहाँलाई नेपाली नेताहरूको राष्ट्रवादी भावना क्षयीकृत हुँदैगएकोमा ठूलो चिन्ता छ । खास गरी देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको रक्षाको सन्दर्भमा नेपाली नेताहरूको निरीहपन सोचनीय पक्ष भएको भन्दै सचेत बनाउँनु भएको छ ।
यसै गरी एक अर्को लेखमा बज्राचार्यले कम्युनिष्टहरूको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र आधारको चर्चा गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको चरित्रमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलनको पक्षलाई उजागर गर्नुभएको छ । खास गरी निजी सम्पत्ति, सर्वहारावाद, धर्म, राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, मानवतावाद, युद्ध र क्रान्तिजस्ता सवालहरूमा देखिएका विचलनप्रति लक्षित गर्दै वास्तविक जवाफदहीताको माग गर्नु भएको छ ।, पुस्तकमा यस्ता धेरै विषय र शीर्षकहरू छन् जसबाट लेखक बज्राचार्यले विकृति र विसंगतिलाई प्रहार गर्दै सत्य, न्याय र समाधानको खोजी गर्नु भएको छ ।
वास्तवमा लेखक बज्राचार्यले प्रस्तुत पुस्तक मार्फत विस्तृत क्षेत्रलाई समेट्नुभएको छ । कतै सत्ताको कुरा गर्नुभएको छ त, कतै संविधानसभाको सार्थकताको प्रश्न उठाउनुभएको छ । यसैगरी नेपालप्रति भारतको हेपाहा प्रवृत्ति, सीमा विवाद, नेपाली नेताहरूको भारतपरस्त सोच, सत्तास्वार्थ र आत्मकेन्द्रीत राजनीतिको बारेमा आवाज उठाउनु भएको छ । लेखक डा. बज्राचार्यले धर्म, संस्कृति, नेवारी परम्परा, शिक्षा, विश्वविद्यालय, ईश्वरको अस्तित्व, इतिहास र अरु यस्ता धेरै विषयहरू शुक्ष्म रुपमा प्रष्ट्याउनु भएको छ । उहाँले विषय वस्तुहरूलाई मिहीन रुपमा केलाउनु भएको छ । जसबाट एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण आएको प्राप्त भएको छ । यो पक्षलाई पुस्तकको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
जनजिब्रोमा प्रचलित शब्दहहरूको चयन गरेर गठन गरिएका वाक्यहरू ज्यादै सरल छन । शैली स्पष्ट र सिलसिलाबद्ध छ । जसले गर्दा अभिव्यक्ति र बोधको पक्ष ज्यादै गहकिलो बन्न पुगेको छ । छपाइ, कागज र समायोजनको पक्ष पनि उत्कृष्ट रहेको छ । यस हिसावले विश्लेषण गर्दा पुस्तकको मूल्य ३ सय राखिनुलाई अनुचित मान्न सकिदैन । पुस्तकभित्र समावेश विषयको विषय र गाम्भीर्यताको पक्षलाई विष्लेषण गर्दा प्रस्तुत पुस्तक देशप्रेमी सबै नागरिकहरूले एकपटक पढ्नै पर्ने खालको छ ।